Sina mankany Espana-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Serivisy serivisy>Ranomasina Mediteraneana sy Ranomasina Mainty>Shina mankany Espana
Fandefasana entana avy any Shina mankany Espana
Raha mitady mpandefa mpitatitra entana azo antoka ianao hanampy ny fandefasana anao any Shina mankany Espana dia eo amin'ny toerana mety ianao.
Na ny serivisy fandefasana entana aza avy any Shina mankany Espana dia efa matotra tokoa ankehitriny, ny SHL dia afaka manandrana manao tsara kokoa ny asa lojika, ankoatry ny vahaolana tsara indrindra sy ny serivisy tsara, afaka manome tahan'ny fifaninanana avy any Shina ka hatrany Espana koa izahay.
Ny SHL dia hanampy anao hisafidy ny làlana fandefasana entana tsara indrindra, ny vidin'ny fandefasana fifaninanana ary ny orinasan-tsambo tsara indrindra hanampy anao amin'ny fanafarana avy any Shina mankany Espana.
China Europe Road Transport avy any Shina mankany Espana
Fantsona logistika fahefatra eo amin'i Shina sy Eropa aorian'ny fitaterana ny rivotra, ny ranomasina ary ny lalamby. Eo amin'ny kaontinanta Eurasia izy amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo horgos any Shina, Passing By kazakhstan, Russia, Belarus and Poland to Spain, the heartland of Europe.
China Railway Express avy any Shina ka hatrany Espana
SHL dia manome serivisy fitaterana mandeha an-dalambe eo amin'i Shina sy Espana ho an'ny entana fandefasana FCL sy LCL, lozisialy tetikady One Belt ary One Road ho an'ny fanafarana sy ny fanondranana vahaolana mifanaraka amin'izany ary afaka mamaha ny olana amin'ny fahazoan-dàlana ao Shina izahay.
Fandefasana entina fiaramanidina avy any Shina mankany Espana
Betsaka ny seranam-piaramanidina iraisampirenena any Espana ary misy ihany koa ny entana fandefasana entana avy any Shina ka hatrany Espana amin'ny alàlan'ny rivotra, SHL dia afaka manome entana an-tsambo tena mifaninana izay ambany noho ny tsena ho an'ny mpanjifanay mifototra amin'ny fandaharam-potoananao.
Fandefasana Ro-Ro / Break Bulk avy any Shina mankany Espana
SHL dia afaka manome RORO ROROMAFI BREAKBULK ho an'ny fitaovana, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Shina ka hatrany Espana. Afaka manolotra vahaolana iray sy vahaolana mifanaraka amin'izany izahay.
Fandefasana entana an-dranomasina avy any Shina mankany Espana
SHL dia manana entana marobe fandefasana entana avy any Shina mankany Felixstowe, Southampton, sns. Mba hahafahanay mitondra hatrany ny fitaterana ranomasina tsara mankany amin'ny seranan'i Espana avy amin'ny mpitatitra maro, ary afaka miantoka ny habaky ny kaontenera isika na dia amin'ny vanim-potoana fara tampony aza.
Tolotra ho an'ny varavarana Sina mankany Espana
Ho an'ny serivisy isam-baravarana, ny SHL dia afaka manadio ny fadin-tseranana haingana any Espana ary mandefa ny entam-pandefasana any amin'ny trano fitobian'ny mpanjifanay tsara, Ankoatr'izay, raha toa ka manokana ianao, SHL dia manana orinasam-barotra izay mety ho consignee amin'ny BL ary hanampy anao hanafatra ny entana. entana soa aman-tsara.
Sahabo ho 7,775 km miala an'i Espana i Sina fa ny mandalo an'io halaviran-dalana io dia mety maharitra kokoa noho ny làlan-dranomasina faritan'ny rano.
Alohan'ny hisafidianany ity fomba fandefasana entana ity dia tokony ho fantany tsara ny seranan-tsambo samy hafa any Shina sy any Espana.
Seranam-piaramanidina lehibe any Espana
Seranam-piaramanidina Asturias Seranam-piaramanidina Malaga
Seranam-piaramanidina Madrid – Barajas Seranam-piaramanidina Reus
Seranam-piaramanidina Almeria Seranam-piaramanidina Ibiza
Seranam-piaramanidina Fuerteventura Seranam-piaramanidina Menorca
Seranam-piaramanidina Bilbao Seranam-piaramanidina Murcia – San Javier
Seranam-piaramanidina Aeroporto de Vigo Seranam-piaramanidina Aeroport de Valencia
Seranam-piaramanidina Federico Garcia Lorca Seranam-piaramanidina Coruna
Seranam-piaramanidina Lanzarote Seranam-piaramanidina Aeropuerto de Zaragoza
Seranam-piaramanidina Alicante – Elche Seranam-piaramanidina Aeropuerto Reina Sofia
Tenerife Seranam-piaramanidina San Sebastian
Seranam-piaramanidina Vitoria Seranam-piaramanidina Gran Canaria
Seranam-piaramanidina Barcelona El Prat Seranam-piaramanidina Salamanca
Seranam-piaramanidina Aeropuerto de-Seve Ballesteros Seranam-piaramanidina Palma de Mallorca
Aeropuerto de Valladolid Seranam-piaramanidina Girona-Costa Brava
Seranam-piaramanidina La Palma Aeropuerto de Tenerife Norte
Seranam-piaramanidina Aeropuerto de jerez
Ny maodely fandefasana avy any Chine ka hatrany Angletera
Isaky ny manafatra avy any Shina mankany amin'ny Fanjakana Mitambatra ianao dia afaka misafidy fomba fandefasana maro.
Seranana iza no tokony hampiasako avy any Shina mankany Espana?
Satria mila seranana afaka mampifandray anao mivantana amin'ny Espana ianao
Ohatrinona ny fotoana lanin'ny sambo avy any Shina mankany Espana?
Raha fintinina, azonao atao ny mampiditra an'izany rehetra izany mba hahitanao ny fotoana rehetra handefasana azy avy any Shina mankany Espana
Ny mpampita entana toy izany dia mahalala ny lalàna sy lalàna mifehy ny fanafarana avy any Shina mankany Espana